वैदेशिक रोजगारी : ६९२१ शव, ११७८ अंगभंग, १८ कोमामा ! - वैदेशिक रोजगारी : ६९२१ शव, ११७८ अंगभंग, १८ कोमामा !
वैदेशिक रोजगारी : ६९२१ शव, ११७८ अंगभंग, १८ कोमामा !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १९ कार्तिक, 08:24:13 AM
काठमाडौं । पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ हजार ८९१ जना युवा कफिनमा फर्किएका छन्। यस अवधिमा १ हजार २५२ भन्दा अंगभंग भएका छन् । मलेसिया र खाडी मुलकमा मात्रै ४२७ जना विभिन्न अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।
त्यस्तै १८ जना कोमामा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोमामा रहेका मध्ये ९ जना कतारमा छन् भने साउदी अरबमा ५ जना कोमामा रहेका छन्। त्यस्तै कुवेतमा २ जना युएईमा १ र बहराइनमा एक जना कोमामा रहेका छन्।
२०७५, १९ कार्तिक, 08:24:13 AM
रोजगारीका लागि भारत जानेलाई निःशुल्क दुर्घटना बीमा
युवा भारततिर, गाउँ सुनसान !